शिव परियार–गायक - मनोरन्जन - नारी
जेष्ठ २५, २०७८ कस्तो हेयर स्टाइल मनपर्छ ?
मेलै पहिले लामो केश बनाएर कर्ली गरेको थिएँ । त्यो समयको फोटो कैद गर्न नसकेकोमा पछुतो लाग्छ । किनभने त्यतिबेला फोटो खिच्ने कुनै साधन थिएन । अहिले म ‘मग स्टाइल’ को काट्ने गरेको छु । यो स्टाइल मलाई राम्रो लाग्छ ।
ड्रेसअपमा तपाईंको रुचि कस्तो छ ?
ड्रेसअपमा त म सौखिन नै छु । कस्तो ड्रेसअप लगाउने भन्ने कुरा सन्दर्भले निर्धारण गर्छ । पार्टी मिटिङमा सुट लगाउँछु । यसले स्मार्ट देखिनु पनि पर्छ । अन्य बेला स्कुटीमा हिड्नेँ हुँदा रफ टपमै हिँड्छु ।
सपिङ कहाँ गर्नुहुन्छ ?
सपिङ म प्रायः विदेशमा गर्छु । बेलायत, दुबई, अस्ट्रेलियालगायतका देशमा म सपिङ गर्छु ।
कस्ता युवती मन पर्छन् ?
मलाई हट युवती मन पर्छन् । म ग्ल्यामर क्षेत्रको भएर होला आकर्षक युवतीहरू नै राम्रा लाग्छन् ।
फुर्सदमा म म्युजिक सिक्छु । साथीभाइहरूसँग भेटघाटमा रमाउँछु । कहिलेकाहीँ सुत्छु ।
मंसिर १५, २०७८ - नायकपछि गायक
चैत्र ४, २०७७ - आफैले गाएका सबै गीत मन पर्छ । - बिन्दु परियार